Indawo yokubhalisa imicimbi | Martech Zone
Indawo yokubhalisa imicimbi
NgoLwesithathu, uDisemba 7, 2011 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 URobby Slaughter
Emuva entwasahlobo, kwakukhona umcimbi omangalisayo, omnandi, omuhle owaxhasa inhlangano esabekayo ebizwa nge-Express Employment Professionals. Uhlelo uqobo lwaluwuhlu lwezikhulumi ezinamandla, kufaka phakathi uPeyton Manning ka-Indy. Abasebenzi benze umcimbi ngokungenaphutha futhi ngicabanga ukuthi isixuku sihlabeke umxhwele ngendlela emangalisayo. Eqinisweni, nginesikhalazo esisodwa kuphela — futhi akuhlangene nosuku lolo mcimbi.
Ngeshwa, leso sikhalazo siyi-doozy. Lo mcimbi ube nesipiliyoni esibi sokubhalisa. Hlala esihlalweni sakho, lokhu kuzoba uhambo olude.
Ngangazi ukuthi kuzoba kubi zisuka nje, ngakho-ke ngathatha izithombe ezimbalwa zesikrini. Nakhu ukuthi kuqale kanjani.
Ngelinye ilanga, ngathola lo myalezo ebhokisini lami lokungenayo. Thatha i-gander futhi ungijoyine ngemuva kwesithombe:
Kufanele ngivume, lena akuyona i-imeyili embi. Ukubizelwa esenzweni kungahle kube kude kakhulu nekhasi, kepha khona lapho ngezinhlamvu ezigqamile, ezidwetshelwe: Cela amathikithi akho namuhla. Bafaka ngisho ne-URL yekhasi lokubhalisa khona lapho emzimbeni we-imeyili. Lokho kuhlakaniphile, ngoba uma ngifunda lokhu kuselula noma othile ephrinte i-imeyili, ngingaqhubeka “ngichofoze” isixhumanisi ngokuyibhala kabusha!
Manje leso sixhumanisi siye kuphi? Yaya ku…
Yebo, okokuqala bekufanele ngidlule ekhasini lokufika langaphakathi. Kulungile, okunye ukuchofoza kuyacasula kancane, kepha lokhu akukubi kangako. Angilifundanga ngempela leli khasi, ngivele ngacindezela inkinobho enkulu… okungiholele ku…
Ngalesi sikhathi ngiphinde ngaqondiswa futhi ngaya kwelinye ikhasi lewebhu, eliqukethe ama-oodle wolwazi. Nalu uhlelo, nali ikheli lendawo, imephu, izinkomba zokushayela, izixhumanisi zomphakathi eziya ku-Express. Zibheke:
Kepha-ke, akukho kulokhu okusebenzayo okwamanje. Ngisadinga "ukucela amathikithi" ngaphambi kokuthi nginakekele yonke le mininingwane. Izikhombisi-ndlela eziqondile zokushayela eziya endaweni akunandaba ngize ngithole amathikithi.
Angiyi ekhasini lakho le-LinkedIn noma ngikulandele ku-Twitter njengamanje. Nginomgomo engqondweni: bhalisela umcimbi wakho! Singakhuluma ngokubandakanya izinkundla zokuxhumana ngemuva Ngithola amathikithi ami. Ngemuva kwakho konke, ngabe abalandeli bePeyton Manning abayizigidi abazami ukuthola amathikithi ngesikhathi esifanayo?
Kulungile, inkinobho ichofoziwe, engiholela efomini elijwayelekile elibizwa ngokuthi…
Ikhasi Langempela Lokubhalisa
Yebo, yimi lowo ngiyaphawula. Ungakhumbula ukuthi nginentshisekelo kumqondo we ukubhalisa komcimbi okukodwa. Ngicabanga ukuthi bekungimangazile ukuthi ukumakethwa kwe-imeyili osezingeni lomhlaba kusuka ku-ExactTarget (nginithanda nina!) Kanye nesoftware yokuphathwa kwemicimbi esezingeni lomhlaba evela eCvent (nginithanda nani!) Bekungeke kuhambise isixhumanisi esiyingqayizivele esivelisa idatha yami kuqala . Okungenani, uyazi ikheli lami le-imeyili!
Nokho ngiqedile manje. (Eshu, ucishe washaya u- "khansela" ngoba bekuseduze kakhulu. Ithi, ngifisa sengathi uJakob Nielsen abone lokhu njengomqondo omubi ngaphezu kweminyaka eyishumi edlule. Noma kunjalo…)
Ikhasi Langempela Lokubhalisa, liyaqhubeka
Kepha ngokusobala, ikhasi elilodwa lokubhalisa alanele. Sidinga ikhasi lesibili ngesizathu esithile.
Mhlawumbe uma kwenzeka abantu belahla ifomu uma befika kule? Akunjengokungathi ifomu lenza noma ikuphi ukuqinisekiswa kwangempela. Yebo, ngazama ukufaka i-zip code eyayinazo zonke izinhlamvu nenombolo yocingo eyakhiwe. Futhi ngachofoza u- “Save and Next” (ngangizokwenza “Gcina” umsebenzi wami, kodwa kwakungewona umsebenzi omningi kangako.) Lokhu kungiholela ku…
Ukuqinisekisa Ukuthi Ubufuna Ukubhalisa Ikhasi
Yebo, empeleni ngithayiphe izinto kahle! Yilokho okushiwo yileli khasi futhi kudinga ukuthi ngiphinde ngichofoze futhi.
Manje kufanele senziwe. Ekugcineni! Ngakho-ke manje yisikhathi se-
Isiqinisekiso Sokubhalisa Esingeyona Isiqinisekiso
Ngamagama amakhulu kuthebhu esihlokweni sithi "Isiqinisekiso." Kepha uma ufunda umbhalo, engikukhuphele wona ku-cap cap engezansi, uyabona ukuthi empeleni lokhu akusona isiqinisekiso. Eqinisweni, manje kubonakala sengathi ithuba lokuthi "ucele ithikithi" ngempela ithuba lokuthi "ucele ithuba lokuba kucatshangelwa ukuthola ithikithi. ”
Qaphela: Kamuva ngikhulume nabanye abantu nge-Express Personnel, futhi le ndlela inengqondo ekubhekeni emuva. Babefuna ukukhuthaza umcimbi kubabukeli abaningi, kepha futhi bafuna ukuzama ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende namathemba abathandwayo aqala ukulingana. Ngibatshele ukuthi ngokubona kwami ​​ulimi olukwi-imeyili kanye nokuphromotha bekungasho noma yiluphi uhlobo lokukhetha, nokuthi ngizizwe sengathi ngichithe imizuzu emihlanu yesikhathi sami. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe bathathe isinqumo sebhizinisi elihlakaniphile maqondana nokukhetha ababekhona okuzoba kuhle ebhizinisini labo, kepha angiyena umlandeli wamagama angilethe kuleli qophelo.
Manje, ngisemuhle ngokungathandeki ngalolu hlelo lokubhalisa. Akungenzanga nje ukuthi ngichofoze izikrini eziyishumi nambili ngenkathi kungivumela ukuthi nginike imininingwane eminingi engamanga, kusobala ukuthi ayinalo ikhono lokuthola usuku lwamanje. Uma ngabe kunjalo, bengingeke ngidingeke ukuthi ngibheke ikhalenda lami ukuthola ukuthi ngabe lukhona ngaphambi noma ngemuva kuka-Ephreli 15 njengamanje. Uhlelo kufanele lukwazi ukukhombisa umyalezo ofanele!
Noma kunjalo, sengiqedile. Qagela ukuthi ngizolinda kuze kube nguMeyi 2 ukuze ngizwe ukuthi ngithola ithikithi. Kepha linda, kukhona…
Ukuqinisekiswa Kwe-imeyili Engifanele Ukukugcina
Impela lolu hlelo lokubhalisa luyangazi ukuthi ngingubani. Kodwa-ke kufanele ngigcine i-imeyili yethikithi lamahhala? Ngokusobala yimi ngedwa onaleli kheli le-imeyili.
Futhi impela lolu hlelo lokubhalisa lungakwazi Count. Inkulumo ethi “ukutholakala kwamathikithi” isho ukuthi uhlelo alukwazi ukugcina ithrekhi yenani lezihlalo esezinikiwe!
Ngo-Ephreli 22, ngithole enye i-imeyili. Ngangicabanga ukuthi ngizobe ngifunda uma ngizothola amathikithi. Kepha esikhundleni salokho, ngithole okuthile okudideka kakhulu:
Ngalesi sikhathi, ngangingaqiniseki ukuthi kwenzekani. Ngabe "ngakhethwa" ukuba ngibe khona namathikithi ajwayelekile, bese ngithola nethuba lokungenela lo mncintiswano? Ukuvela kwenkinobho ethi “Cela Amathikithi” ezansi nakho bekuphazamisa. Lokhu kuholele emuva kulelo fomu ebengivele ngiligcwalisile. Ngakho-ke mhlawumbe ukubhaliswa kwami ​​kwasekuqaleni bekunganakiwe? Ngokusobala lokhu bakuthumele ekhelini elifanayo le-imeyili, njengoba kukhonjisiwe kunyaweni.
Nginqume ukuhamba kahle ngokwanele ngedwa. Bese…
I-imeyili Yokwamukelwa Kwangempela
NgoMeyi 4, ngithole lo myalezo we-imeyili. Bekubukeka kujwayelekile ekuqaleni, kepha ngibe sengibona ukuthi ngingene!
Bengingaqondi ukuthi kungani befuna ukuza ehhovisi lami bezonginikeza amathikithi. Bengingavele ngiphrinte i-imeyili. Futhi kukhona owabashiya phansi komnyango, kepha akekho noyedwa owayekhona ngaleso sikhathi ngakho ngicabanga ukuthi kungenzeka kube wukuchitha uhambo.
Angikwazi ukukutshela ukuthi umcimbi wangempela ubungakanani ngoMeyi 18. Uphelele ngazo zonke izindlela. Izinkulumo ezinhle. Ukubulawa okukhulu. Indawo ehlotshiswe kahle. Ukudla okuhle nokunika amandla kakhulu. Kepha ukuhola bekukubi impela, ikakhulukazi uma kubhekwa udumo lomkhakha womhlaba wezinkampani ezimbili ezibandakanyeka ekubhalisweni kwemicimbi. Kwenzenjani?
Ngicabanga ukuthi i-ExactTarget neCvent zingamapulatifomu nje, futhi ungazisebenzisa kabi njengoba ungasebenzisa obunye ubuchwepheshe. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe bekunenkinga yenhlangano ngokusetha uhlelo lokubhalisa imicimbi futhi iqembu elenze lokhu alizange lisebenzise ubuchwepheshe obutholakalayo ukuklama ulwazi lokubhalisa. Umlayezo kufanele ucace, kepha: imicimbi emikhulu kufanele ibe nokubhaliswa komcimbi okubushelelezi, okulula ukusebenziseka. Leyo yingxenye yokumaketha kwakho! Abantu abaningi bazobandakanyeka kakhulu kulo lonke ulwazi uma kulula ukubhalisa, kulula ukuhamba, futhi kulula ukukuqonda okunikezayo.
Ngakho-ke ukuphela kwami ​​ukukhala.
Izindleko Zokumaketha ku-Facebook
I-Pagelines 2.0 Iphinda ivuselele i-WordPress Theming ne-Ecommerce
Dec 7, 2011 ku-9: 52 AM
Kungenzeka ukuthi lo mcimbi ubumangalisa, kepha akukho kungabaza engqondweni yami ukuthi balahlekelwe ababhalisi abaningi abasendleleni ngenxa yezinyathelo ezikhungathekisayo nezingenangqondo. Ngeke ngibanikeze ukudlula - kungakhathalekile ukuthi inkampani yabo injani nenqubo. Abebekusho bekusho ukuthi "kubo" kunengqondo… hhayi ukuthi kunengqondo ku "wena". Futhi "wena" kufanele uhlale ubaluleke ngaphezu "kwabo".
Dec 7, 2011 ku-10: 21 AM
Iyadiyazela. Into enjengaleyo ibizongenza ngingawafuni amathikithi kumgomo wento nje. Kepha uma bezimisele ukungilethela amathikithi, ngizojabula ukubanikeza izinkomba. Okokuqala kufanele bangene emotweni, bese beqala ukushayela. Ngizobatshela ukuthi iyiphi indlela lapho sebeshaye khona amamayela ayi-12.